Mayelana Nathi - Ares Floor System
I-Aeas Floor Systems
I-Ares Floor Systems ikhula ngokushesha
inkampani yezobuchwepheshe ekhiqiza futhi ithuthukise imikhiqizo yokucubungula ngaphezulu.
Imboni ihlanganisa: i-floor grinder, i-vacuum cleaner yasezimbonini, ipholisha yaphansi, imoto eshanelayo, izesekeli nezinto ezisetshenziswayo kanye nolunye uchungechunge lwemikhiqizo ecishe ibe yi-100 eyi-11. Namuhla, i-Ares Floor Systems ingumholi emakethe yamazwe ngamazwe yezinhlelo zaphansi ezisekelwe kumshini wokugaya phansi, ezinezixazululo zobuchwepheshe ezimbalwa ezivikelwe ngelungelo lobunikazi emakethe. I-Ares Floor Systems ineminyaka engaphezu kwe-10 yokuhlangenwe nakho okuhlangene embonini kakhonkolo futhi inikeza isevisi yamakhasimende engenakuqhathaniswa. Sizinikele ekusebenziseni i-AIOT, i-cloud computing, idatha enkulu nobunye ubuchwepheshe, okuyibhizinisi elisha lobuchwepheshe obuphezulu elihlanganyela ekucwaningeni, ekuklameni nasekukhiqizeni imishini yaphansi nezisombululo zesistimu yaphansi. Siyisinqumo sokwenza ochwepheshe bekhonkrithi!
Ngezinga eliphezulu lesevisi kanye nezisombululo zemakethe ezingcono kakhulu nezisha, ezibanzi, sinikeza amakhasimende ethu emhlabeni wonke indlela elula, evumelana nemvelo nenenzuzo yokwenza imisebenzi yawo yansuku zonke.
Indaba ye-Ares Floor Systems
I-Ares Floor Systems iyisistimu enamandla, ehamba phambili ehamba phambili yokucubungula imishini yokucwaninga nokuthuthukiswa, amabhizinisi okukhiqiza. I-Ares Floor Systems iklonyeliswe ngeziqu zokuhlonishwa ze-Shanghai High-tech Enterprise kanye ne-Jiangsu Provincial Science and Technology Enterprise. Ngasikhathi sinye, inani lobuchwepheshe lithole amalungelo obunikazi bokusungulwa, amamodeli asetshenziswayo, idizayini, ukuvikelwa kwamaphoyisa esoftware, ibhizinisi kanye nemikhiqizo eyahlukene nge-CE, SGS, ISO kanye nezinye izitifiketi zamazwe ngamazwe nezasekhaya. Sisungule uhlelo lwesevisi oluphelele olunabalingani abacishe babe ngu-23,000 eChina. Izikhungo zokumaka sezihlanganise amadolobha angaphezu kuka-100 ezweni lonke. Ngesikhathi esifanayo, imikhiqizo yethu ithunyelwa emazweni angu-138 nasezifundeni eYurophu, eNyakatho Melika, eNingizimu-mpumalanga ye-Asia, eMpumalanga Ephakathi njalonjalo.
1. Umhlinzeki oholayo, osebenza ngokugcwele
Amaqembu asemqoka e-Ares Floor Systems angamakhono aphezulu anesipiliyoni somsebenzi esingaphezu kweminyaka eyishumi ezinhlelweni zokwelapha eziphansi kanye nezicelo. Sinolwazi olucebile ocwaningweni nasekuthuthukisweni, ekukhiqizeni, ekulawuleni ikhwalithi, ukuphathwa kwe-supply chain, ukuphathwa kwemikhiqizo kanye nenkonzo yamakhasimende ye-floor grinder, i-vacuum cleaner yezimboni, kanye nezimoto ezishanelayo.
2. Ukuthuthukiswa komkhiqizo oqhutshwa amakhasimende
I-Ares Floor Systems ihole intuthuko embonini yokugaya phansi iminyaka engaphezu kwe-10 ngokuba nguzakwethu okhuthele futhi osabelayo kosonkontileka emhlabeni wonke. Isu kube wukuthwebula ngenkuthalo izidingo zabasebenzisi, osonkontileka, izinkampani eziqashisayo, abaklami bezakhiwo kanye nabanye abalwela ukuba seqhulwini lentuthuko - nokuguqula izinselele zabo zansuku zonke zibe amathuba amasha.
3. Amakhono okuxhumana aqinile
Amandla e-Ares Floor Systems akukusebenzelana okucacile phakathi kwemishini, izesekeli, amathuluzi nolwazi esilunikezayo. Igrinder ngayinye yaphansi, isicoci se-industrial vacuum cleaner, izimoto nezindlela ezishanelayo ziphakathi kwezihamba phambili embonini. Ndawonye bakha izixazululo ezidala izinzuzo eziphezulu zebhizinisi kanye nemiphumela emihle.
4. Isipiliyoni samakhasimende esihle kakhulu
I-Ares Floor Systems inabameleli abaqeqeshwe kakhulu nabanolwazi olunzulu ngemishini yethu nezinhlelo zokusebenza. I-imeyili:order@aresfloorsystems.com
Umshini Wokugaya Oyisicaba, I-Gear Driven Floor Grinder, Umshini Wokugaya Ngesivinini Esikhulu, Isikhiqizi Sezihlalo Zemoto, I-Car Shampoo Vacuum, Umshini Wokugaya Izihlahla,